Madaxweyne Gaas oo ka qayb galay xil wareejinta Rugta ganacsiga Puntland (Sawirro) – Puntland Chamber of Commerce
Madaxweyne Gaas oo ka qayb galay xil wareejinta Rugta ganacsiga Puntland (Sawirro)
by mohamed Salad( Ramaas Software) —	29th March 2015
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 11-1-2015 magaalada Garoowe ee caasimada Puntland gaar ahaa Hoolka Jaamacada Bariga Afrika kaga qeyb galay xafladd xilka loogu wareejinayey Gudoonka cusub ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland.
Munaasibada ayaa waxaa sidookale ka soo qeyb galay Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar Camey, Wasiiro, Xildhibaano katirsan Golaha wakiilada Puntland, Ganacsato, Isimo , Waxgarad, culimo’udiin iyo marti sharaf kala duwan.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadal ka jeediyey madasha xafladu ay ka socotay ayaa u hambalyeeyey maamulka cusub ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland, isagoona ku booriyey in ay dadaal dheer u galaan sidii loo hormarin lahaa guud ahaan Ganacsiga Puntland.
”Waxaanu ubaahanahay inaanu isbadalno, aduunku maanta meesha uu marayo iyo waxa aan konton sano kahor aynu samaynjirnay inaan weli suubinayno isma qabanayso, horumarka aanu rabnana magaarayno ”Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Ganacsatada Puntland ayuu Madaxweyne Gaas ka dalbaday in ay la jaan qaadaan ganacsatada aduunka, waxaana uu tusaale u soo qaatay jidadka wadamada horumaray in ay dhisaan shirkado ay leeyihiin ganacsato, iyagoona wax mashruuca ku qaadan balse markii ay dhameeyaan ay dib lacagta ka gashay uga qaadaan gawaarida isticmaasha wadooyinkaasi.
”Dhis adigu wadada lacagtaadina kala soo laabo faa’iidana ka hel kabacdiina shacabka iyo dawladda dib ugu celi, wax weyna maahan ajarna waad ka helaysaa dalkuna horumar ayuu ka helayaa ”Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
”Culimadu nagu diidi maayaane sakada aad sanadka bixisaan dawladda ku taageera, bal aan tijaabino halsano sakadeed aan garoon diyaradeed keliya ku dhisano maxaa inoo diidaya mise cid gaar ah ayaa la siiya sakada ”Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu dambeyn Ganacsatada Puntland ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan dagaalka adag ee ay dawladu kula jirto burcad diimeedka Ururka Al-shabaab, kuwaasi oo guulo waaweyn ay ka soo hoyeen ciidanka Puntland.